कहिलेसम्म जारी रहन्छ बिहानपख बाक्लो हुस्सु लाग्ने क्रम ? — Sanchar Kendra
कहिलेसम्म जारी रहन्छ बिहानपख बाक्लो हुस्सु लाग्ने क्रम ?
काठमाडाैं । तराईमा आउँदो शुक्रबारसम्म बिहानको बेला बाक्लो हुस्सु लाग्ने सम्भावना भएकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिम तराईका धेरै ठाउँमा अस्ति सोमबारदेखि बाक्लो हुस्सु लाग्न थालेको हो ।